ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပြီလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို — မြန်မာဌာန
၂ဝ၁၁ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေစဉ်။
NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမမှာ ဒီကနေ့ မနက်က ကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောကြားတာ ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ လူတိုင်း တာဝန်သိသိ စဉ်းစားရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ရချင်ရင်၊ ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မြဲချင်ရင်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ မွေးမြူရမှာ ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို ဒီမိုကရေစီနေ့လို့ သတ်မှတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ အခမ်းအနားမှာ သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်တဲ့ NLD ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး ကလည်း အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဒီမိုကရေစီ စနစ်သာ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဆီလျော်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ရမယ်လို့ အမျှော်အမြင် ကြီးစွာ လမ်းညွှန် မိန့်ကြားခဲ့ဖူးကြောင်း အစချီပြီး အခုအခါမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အဆောက်အအုံတွေ အခြေချဖို့ ကြိုးပန်းနေနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးတင်ဦးက ပြောဆိုသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို NLD ပါတီဝင်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ၈၈-မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားသူ ၂၀၀ လောက် တက်ရောက်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက် တချို့ကို ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်က စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
NLD က ပညာ၇ွိ ဘဘ တို. ခင္ဗ်ား.......ၾကာသပေတး ကို ေတာ. မွန္ေအာင္ေ၇း ၾကေစခ်င္ပါ တယ္.....နိုင္ငံဂုဏ္
ေဆာင္ ပါတီ အခမ္းအနား ၾကီး မွာဗ်ာ။